महिनावारी महिनामा तिन पटक हुन्छ - टिप्स - साप्ताहिक
महिनावारी महिनामा तिन पटक हुन्छ
- डा.बालकृष्ण साह
पुस १८, २०७२
म १५ वर्षकी भएँ र हाल कक्षा ९ मा अध्ययनरत छु । मेरो महिनावारी सुरु भएको २ वर्ष मात्र भयो । सुरुमा महिनावारी नियमित भए पनि अहिले नियमित छैन । कहिले १ महिनामा २ पटक त कहिले ३ पटकसम्म भैदिन्छ । मलाई धेरै चिन्ता लाग्छ । कतै यसले कमजोरी वा अन्य समस्या त उत्पन्न गर्दैन ?
सामान्यत: महिनावारी २१ देखि ३५ दिनको अन्तरमा ३ देखि ५ दिन सम्म हुन्छ । किशोरावस्थामा तथा महिनावारी सुक्ने बेलामा महिनावारी अनियमितता हुनसक्छ । त्यस्तो महिनावारी गराउने हार्मोनहरूको सन्तुलन स्थापना नभएकाले हुन्छ । कसै–कसैमा अण्डवाहिनी नली तथा अण्डाशयको संक्रमण, थाइराइड तथा अन्य हार्मोनको असन्तुलनले पनि महिनावारी अनियमित हुनसक्छ । महिनावारी धेरै पटक हुँदा स्वभाविक रूपमा बढी रगत खेर जान्छ र रक्तअल्पता वा कमजोरी हुन सक्छ । त्यसैले चिकित्सकको परामर्शमा उपचार गराउनु उपयुक्त हुन्छ । यसका साथै पोषिलो खानेकुरा, झोल खानेकुरा एवं आइरन चक्की खानु तथा आराम गर्नुपर्छ ।
प्रकाशित :पुस १८, २०७२
यौनसम्पर्क भएपछि मलाई शंका लाग्छ म औषधी खान्छु । यी औषधी धेरै खाँदा के हुन्छ ?
सानो लिङ्ग भएको मानिससँग सम्पर्क गर्दा सन्तुष्टि हुन्छ कि हुँदैन ?
धेरै पुरुषसँगको सम्पर्कले यौनरोग हुन्छ ?
जोसँग पैसा हुन्छ उनीहरूसँग दिमाग हुँदैन
प्रेम एकपटक हुन्छ कि बारम्बार ?
पुरस्कारले लेखक परिवर्तन हुँदैन पाठकको दृष्टिकोण परिवर्तन हुन्छ
रोपाइँमा आँखाको सुरक्षा असार १५, २०७६
मोडलको मोबाइल टिप्स असार १३, २०७६
कस्तो फेसन सुहाउँछ ? जेष्ठ १७, २०७६
बिहान गर्न नहुने गल्ती वैशाख ३१, २०७६
दुर्घटनाका बिरामीको प्राथमिक उपचार वैशाख ३०, २०७६
सुरक्षित पासवर्डका लागि वैशाख १९, २०७६
पश्चिमोत्तानासन वैशाख १७, २०७६
केशको स्याहार वैशाख ५, २०७६
रंगोली बनाउँदा कार्तिक २१, २०७५
भाइमसला किन्दा कार्तिक २०, २०७५